Fampiroboroboana ny fahazoana endrika endrika ho an'ny mpiasan'ny fampiharana ny lalàna Camera- Vahaolana OMG
Fampiroboroboana ny fahazoana endrika endrika ho an'ny mpiasan'ny fampiharana ny lalàna
Ny fanekena ny tarehy dia mety hanova ny fiarovana ny tobin'ny rivotra misy antsika, ny tontolo iainana sy ny trano, na izany aza, amin'ny alàlan'ny alàlana amin'ny lalàna, izay mety hanantenan'ny olona iray hahitana ny fandraisana an-tanana faran'ity fanavaozana vaovao sy vaovao ity, dia mbola tsy nandeha tsara io. Ny fiampangana ny tsy fahamarinana, ny tsy fanarahan-dalàna, ny fikafika ary ny tsy fahombiazana dia nivadika ho fenitra. Na izany na tsy izany, ny olana lehibe dia ny 'fanaparitahana': ny motera AI mifehy ny fandaminana ny fanekena endrika dia tokony ho vonona ho an'ity zava-misy ankehitriny ity. Ankoatr'izay, ny fanakianana kokoa, ireo fonosana manodidina ny fampiasana sy ny fandrafetana ny fanavaozana dia tokony haorina tsara.
Ny fanekena ny tarehy dia natao voalohany indrindra hanamafisana ny maha-olona sy ny fifehezana ny fidirana, hiasa amin'ny fepetra voafehy ary hanamafisana fa ny olona iray no antoka hiarovany azy. Ireo mpakan-tsary dia mamily andiam-panala, ary mifanohitra amin'ny tarehy tsirairay. Ny tenany dia iharan'ny fahasahiranana. Na ahoana na ahoana, rehefa misy lalao dia inona no mitranga? Inona no dikan'ny rafitra afaka misolo tena ny kalitao fampahalalana, ny toe-javatra voajanahary ary ny sisiny fanoratana? Amin'ny fahaiza-manao inona no azon'ny mpampiasa mamindra ny fifindrana amin'ny fanavaozana mankany amin'ny valiny?
Amin'ny alàlan'ny fanangonam-bola marobe amin'izao fotoana izao eo am-pitaterana, mety misy ny tongotra an-tongotra ampy hamaritana ireo olana ireo. Ny fahefan'ny polisy dia manandrana am-pahombiazana ny fanekena ny tarehy, ny fampiasana ireo tranga fampiasana. Mbola betsaka ny asa tokony hatao, saingy ny valin'io fanamby 'deployability' io dia mety, eo imasony mivantana.
Herinandro lasa izay ny vaovao fa nanandrana ny fankasitrahana ny endrik'i Amazon ny FBI dia nampihorohoroana tamina efitrano fiambenana iray izay nisafidy ny fanekena ny endrika takiana amin'ny lalàna. Ampy izay hoy. Raha ny zava-nitranga, ny maodely resahin'ny FBI momba ny toerana azo nampiasana ny fanavaozana dia teo amin'ny kely indrindra tamin'ny ady sarotra natao: ny fanivanana horonantsary lava be an'ny horonantsary voarakitra ho hitan'ny mpikomy Vegas, Stephen Paddock. "Nanana mpandraharaha sy manam-pahaizana izahay, valo isaky ny mihetsika, miasa isan'andro, isan'andro mandritra ny telo herinandro miaina ny fandraisam-peo", hoy ny Tale Jeneraly lefitra FBI, Christine Halvorsen tamin'ny fivorian'ny AWS tamin'ny Novambra.
Na dia eo aza ny fikambanan'ny lalàna momba ny lalàna dia mampiasa ny fankatoavana ny tarehy amin'ny fizahana horonantsary horonantsary voarakitra, ny fandaniam-potoana ary ny fitrandrahana, sarotra kokoa ny mampiasa tsy tapaka. Ny aritmetika amin'ny fanamarinana ny mpandeha tsirairay ao anaty efitrano malalaka feno hipoka na dia ireo firaketana fiambenana kely aza dia manery ny fankatoavana endrika tarehy araka izay azo atao. Ny frameworks tena tsara indrindra ihany no afaka mampifanaraka. Araka izany, mbola misy mahagaga fa kely sisa ny fanekena ny tarehy tonga amin'ny alàlan'ny fanenitra mahazatra. Na izany na tsy izany dia hiova.
Herinaratra iray manandramana ireo fomba hafa hisolo tena ny tarehy hatrany dia ny Metropolitan Police any London. Cressida Dick, tompon'andraikitra, dia nilaza, herintaona lasa izay, fa «mihatsara sy tsara kokoa ary tsara hatrany hatrany ny fanekena ny tarehy… Mieritreritra aho fa tokony hisaintsaina ny fomba hampiasana an'ity fanavaozana ity isika raha hijery raha matanjaka sy mamokatra ho antsika io. Saingy, ny volana desambra, rehefa najanon'ny polisy polisy ny fiara fitateram-bahoaka any amin'ny faritra Soho ao an-tanàna miaraka amin'ny trano misy fakan-tsarimihetsika eo an-tampon-trano mba hijerena ireo tratry ny Noely manoloana ny famantaranandron'ireo mpihetraketraka ilaina, dia niteraka fanehoan-kevitra miavaka avy amin'ireo mpiaro ny fiarovana. Ny sefon'ny Big Brother Watch dia niantso azy io ho "fanararaotana mahatsiravina ny fotoan'ny polisy sy ny vola misokatra" ary nilaza izy fa "tara loatra ny fametrahan'ny polisy ity fanavaozana mampidi-doza sy tsy voalamina ity."
Raha ny fahitana ireo lafiny maro mampiahiahy amin'ny fanavaozana, dia nanazava ny maha-zava-dehibe ny hidim-baravarana ny Polisin'ny Met. I Ivan Balhatchet, ny met's key mitarika ho amin'ny fanekena mivantana ny endriny, dia nilaza tamin'ny fanambarana tamin'ny volana Desambra fa “manohy mifanerasera amina mpiara-miombon'antoka marobe izahay, ny sasany izay manohitra amin'ny fomba mahomby ny fampiasana ity fanavaozana ity; mba hanondroana ny fahitsiana ary hiroso amin'ny fifanakalozan-kevitra mahasoa, dia noraisinay ny olona sy ireo fivoriana izay samy hafa ny fahitany ny fampiasantsika ny fanavaozana ny endrika ho an'ity fandaharana ity. ”
Tsy ny fankasitrahana ny tarehy fotsiny no hitan'ny bodycams. Ireo gadona horonan-tsary mifono vy ireo dia manenona ireo garazy ataon'ny polisy manerana an'izao tontolo izao, manome fitantanana porofo, fahasalamana ara-panjakana ary fampiononana malalaka. Sarimihetsika firaketana bodycams noho ny fihenan'ny rindran-tsokosoko vita amin'ny vatana na misy rahona. Ny vatan-jaza sasany an-tserasera mivantana amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso efitrano. Ny hafa indray mifandray amin'ny holavan'ny fitaovam-piadiana ka mahatonga ny fandraketana horonantsary. Rehefa mandroso ny telefaona finday, ireo modely amin'ny vatana izay miantehitra amin'ny andian-tariby dia mijanona ho manjaka kokoa. Midika izany fa hihaona ny fandrosoana roa. Ny fankasitrahana ny tarehy amin'ny bodycams dia tranga manaraka izao. Mamelona ireo tompon'andraikitra manana fandaharana mijery fiambenana ilaina, olona mafana fo, tsy mahita tovolahy, tsy misy mpiaro.
Inona koa, vao nanomboka.
Tamin'ny volana Desambra, raha niresaka momba ny vaniny maintso i Londres, dia nisy fitsapana hafa momba ny fanekena ny endrika niseho tao amin'ny 'tanàna' iray hafa amin'izao tontolo izao izay kilaometatra maro be avy eo. Ity fitsapana ity dia tsy namokatra fiasa. Tsy nalaza izany. Tsy fantatra mazava ny sombiny. Na izany aza, dia azo jerena kokoa ny fomba handefasana ny fanekena ny tarehy amin'ny polisy mandeha ra. Toy izany koa tamin'i Londres, ny fitsapana dia nahitana boulevards tao an-tanàna niaraka tamin'ny famantaranandron'olona manodidina ny 2,000. Na izany na tsy izany, io fitsapana io dia nifantoka tamin'ny 'fijanonana sy fikarohana', miaraka amin'ny fanekena ny tarehy amin'ny bodycams, fa tsy ny CCTV na ny van-maso. Ny fitsapana dia nahitana tompon'andraikitra vitsivitsy manao gadget izay niasa tsy tapaka avy amin'ny lisitra fiambenana mitovy amin'izany. Tao anatin'ny ora roa voalohany dia nisy sary roa namboarina taorian'ny lalao famantaran-tarehy mahomby avy tamin'ireny bodycams ireny. Voampanga ho tompon'antoka amin'izao fotoana izao ireo voarohirohy.
Mampitsahatra ny fitadiavana ary ny fitadiavana azy dia tsy miady hevitra. Ny fahefana toy izany dia mifototra amin'ny fototry ny fanaovana pôlitika amin'ny alàlan'ny fanohanana, miteraka olana momba ny fanaovana profiling sy ny fironana ary ny fanatanterahana izany. Na eo aza ny famakafakana dia mitaky hery be izy io, maka fitaovam-piadiana eny an-dalana ary misambotra ireo fehezin-trano sy lakile. Ny hamafin'ny toetra dia singa lehibe amin'ny paikady. Rehefa miompana amin'ireo izay tokony hajanona. Ny bodycams miaraka amin'ny fiantohana ny tarehy dia tratra ary voamarina tsara, toy ny tsirairay amin'ny alàlan'ny fampiharana sy ny fomba fiasa. Antoka meloka fanta-daza, olona mpiray tsikombakomba - na dia misy manavaka na tsia,
Ny zaza tsy ampy faharoana sy ny olon-dehibe, azo ekena ny zavatra rehetra dinihina. Ho toy ny mpitari-dàlana amin'ny fahalalana nanamontsana ny sisin'ny polike dia manome tombony tena izy. Ireo fakana sary voatonona etsy ambony dia natao tsy ho takatry ny paikady tahaka izany. Amin'ity tranga ity, nitondra fomba hitondrana ireo faty ireo nanerana ny tanàna. Ny vokatra azo dia tsy azo ialana.
Ny fampiasana ny fanekena ny tarehy amin'ny bodycams koa dia manome fanoherana ny fiampangana ny predisposition ara-poko. Ny alàlan'ny paikady dia azo apetraka amin'ny manampahefana tompon'andraikitra mijery ireo tsy ekena ny tarehy, na dia rehefa miato aza. Raha misy ny fiampangana dia ny fijanonana sy ny fitadiavana ny fanaovana tsikombakomba ambany indrindra amin'ny tambajotra an-tsokosoko, ny fankatoavana ny tarehy amin'ny vatana dia manome fitoviana. Ity karazana toy ny ampinga ity izay hanampy fahazoan-dàlana bebe kokoa bebe kokoa.
Ny fanekena ny tarehy amin'ny vatan'ny vatana dia hanome fanamafisana fanampiny ho an'ny lalao avy amin'ny fiara mpanara-maso sy fakan-tsary CCTV. Taorian'ny lalao marika, ny tompon'andraikitra iray amin'ny alàlan'ny mandeha manatona ny olona iray ary manao fisafoana faharoa avy amin'ny bodycam, mihazakazaka avy amin'ny lisitry ny fiambenana mitovy. Raha toa ka misy ihany koa ny lalao dia mbola misy zavatra hafa raisina. Raha ny tenany manokana dia fiarovana ara-nofo hanoherana ny fihetsika diso izany. Manampy izany dia manome olona iray amin'ny fikambanana tsirairay alohan'ny hanaovana ny famaranana farany.
Edge art Intelligence miasa:
Ity fananganana rafitra amin'ny fanekena tarehy ity dia ho hitantsika eo no ho eo. Ny fifandraisan'ny fakantsary samihafa amin'ny firaketana fiambenana mitovy, ary eo amin'ny iray hafa. Ny fanovana mifindra amin'ny telefaona finday dia manokatra ireo tombony bebe kokoa amin'ny fahalalana an-tendrony. Manam-pahaizana momba ny finday izay afaka mifandray amin'ny finday, toy ny teboka afovoany. Ny fahaizana mihazona hatrany amin'ny firaketana fiambenana isan-karazany sy sombintsombiny ary toromarika. Samy miaina sy mitohy.
Raha sanatria misy fisehoan-javatra, rehefa miova ny sary fahalalana, dia velombelona foana ny fakantsary rehetra - ao anatin'izany ny bodycams. Ny tombony azo araraotina amin'izany dia ny fahafaha-mampiasa bodycams hendry mba hanome lalao ifotony, manenjana ny fehin-tànana, miaraka amin'ny lalao amin'io fotoana io nalefa tamina rafitra mifototra amin'ny rahona mifototra amin'ny fampiasana motera AI mitovy amin'izany, na AI hafa. môtô, na koa motera AI marobe, mba hanome fantsona marimarina kokoa alohan'ny hisehoan'ny 'mandrindra' amin'ny mpitantana. Ny ankamaroan'izany dia hitranga afaka roa segondra.
Ny valiny dia mety ho akaiky ny 100% tsy mety resy.
Ity no Taom-baovao:
Tokony ho taonan'ny fankasitrahana ny tarehy io fiampangana ny fironana tsy misy diso io. Tokony ho taona raha toa ka misy ny fanamafisana fa tsy ny fandrosoana rehetra no ekena ho mitovy. Ireo fitaovana isan-karazany dia tokony ho azo amin'ny tanjona samihafa. Ary koa, ny fanombanana mivaingana amin'ny motera toy izany amin'ny toe-javatra voafehy dia tokony hanolotra fomba fiasa amin'ny fanondroana mpanjifa sy fanamafisana valiny.
Ny orinasan'ny bodycams amin'ny hetsika androany dia nifantoka tamin'ny horonantsary kaonty ho an'ny rafitra fitantanana porofo. Amin'izao fotoana izao, Bodycam 2.0 dia hamindra ny fifantohana amin'ny fandatsahana horonantsary mivantana, ny fanekena ny tarehy ary ny gadget-Edge-AI. Ity taom-panatanjahantena IoT ho avy sy ho avy ity dia hanatevin-daharana ireo gadget IoT amina miliara izay halefa amin'ny fandaharana 4G sy 5G mandritra ny taona ho avy. Niniana nalamina, hizara vaovao, hizarana hatramin'ny farany ka hatramin'ny fifantohana, ireo gadget ireo dia handroso lavitra amin'ny 'raha sendra misy horonantsary tsy ampoizina misy horonantsary mankany amin'ny fitaovan'ny polisy fototra. Farany, ny intermingling dia hahita ireo karazana bodycam ampiasain'ny ankehitriny hivadika finday finday misy sary mihetsika sy goavambe izay hanamafisana ny trondro sy ny fahaverezan-kevitra amin'ny alàlan'ny fanadinana AI sy fampahafantarana marobe momba ny tompon'andraikitra fanapahana. Tonga amin'ny fiafarany ny vanim-potoanan'ny fakantsary fakana sary tokana-tokana.
Ho fankatoavana ny tarehy, ny resaka sy ny fifandirana ao amin'ny 2019 dia tokony ho manodidina ny asa tanteraka tsy nahazo alàlana amin'ny fampiroboroboana sy ny fiarovana ny fandraharahana. Fampahalalana voakaly ao anaty silikil IP napetraka amin'ny fakantsary IP maotina, azon'ny rehetra. Nohazavaiko taloha ny ahiahy tokony hananana amin'ny hevitra momba ny asa fandraharahana, sekoly, oniversite, mety ny drafitra famandrihana manodidina ny fandaminana ny fikambanan'izy ireo manokana ho an'ny mpisolovava, raha jerena ny angon-drakitra misintona na openource. Ny fampiasa an'ity fanavaozana ity amin'ny fanomezan-dàlana dia hampitsahatra tsy hanakorontana.
Araka izany, raha ny lafiny policing, ny 2019 dia hatokana ho fotoana voafaritra ho fankatoavana ny tarehy. Hiova ho fandaminana ny fitsapana. Hisy valiny ny fandaminana. Ho resy ny fifandirana. Ny ankabeazan'ny fiarahamonina ankapobeny, amin'ny farany, dia hanapa-kevitra hanakaiky ny fiarovana amin'ny tokantrano sy ny fikatsahana ny fiarovana amin'ny fahalalahana. Nahatsapa ny antso maro momba ny fetra sy ny torolàlana, ny famerenana iray nizara ho an'ity herinandro ity dia nahita fa ny 18% ny Amerikanina manaiky ny fanekena ny tarehy dia tokony ho voafandrika tsara amin'ny faharatsian'ny fiarovana misokatra. Ity ihany koa, ity no toerana anaovana bodycams hanao ny marika. Amin'izay fotoana izay azontsika atao ny manomana ny pôlisantsika mba hahitana ny fomban-keloka fantatra tsirairay, ny olona iray tsy fantatry ny olona iray tsy fantatra, ny zaza tsy ampy taona na ny zaza tsy ampy taona, amin'ny 99% na mihoatra ny mari-pahaizana mendrika kokoa, amin'izay fotoana izay. Ny zavatra rehetra noheverina, azontsika atao izao.
Fampiroboroboana ny fahazoana endrika endrika ho an'ny mpiasan'ny fampiharana ny lalàna no farany niova: Desambra 5th, 2019 by Admin